बालविकासमा स्थानीय सरकार : कतै साइकल दिए, कतै पारिश्रमिक बढाए « AayoMail
बालविकासमा स्थानीय सरकार : कतै साइकल दिए, कतै पारिश्रमिक बढाए
रुपन्देहीका स्थानीय तहहरूले बालबिकास केन्द्र सुधारका लागि फरक-फरक अभ्यास सुरु गरेका छन्। कतिपय तहले बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ताका लागि साइकल वितरण गर्नेदेखि पालिकाभित्र नमूना बालविकास केन्द्र बनाएका छन्।
यस्तै धेरैजसो पालिकाहरूले सहयोगी कार्यकर्ताको पारिश्रमिक बृद्धिदेखि कक्षा व्यवस्थापनमा जोड दिएका छन्। यसले बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्तालाई थोरै भए पनि स्थानीय सरकार आएको अनुभूति भएको छ।
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले पालिकाको दुईवटा विद्यालय बुद्ध आदर्श मावि र तेनुहवा सामुदायि माविमा नमूना बालविकास केन्द्र बनाएको छ। ति विद्यालयमा रहेको बालविकास केन्द्रको कक्षामा बसाई व्यवस्थापन, सामग्री व्यवस्थापन र टेलिभिजन जडान गरिएको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका नगर प्रमुख मनमोहन चौधरीले जानकारी दिए।
उनले बालविकास केन्द्र विद्यालयको जग भएको हुँदा बालविकास केन्द्र सुधारका लागि नगरपालिकाले काम सुरु गरेको बताए। ति दुई बालविकास केन्द्रका लागि नगरपालिकाले ५ लाखका दरले रकम उपलब्ध गराएको छ। उक्त नगरपालिकाले सहयोगी कार्यकर्ताहरूलाई साइकल समेत प्रदान गरेको छ।
पालिकाभित्र रहेका ८४ जना बालविकासका सहयोगी कार्यकर्तालाई साइकल दिइएको शिक्षा शाखा प्रमुख डा. कुलप्रसाद खनालले बताए। घरबाट बालविकास केन्द्रसम्म र अभिभावकको घरसम्म पुग्नका लागि सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले साइकल दिइएको डा. खनालको भनाइ छ। उनका अनुसार नगरपालिकाले साइकलका लागि करिब ७ लाख बजेट खर्च गरेको छ।
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको मसिना माविमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ता मिरा गुप्ताले साइकल पाएपछि विद्यालय जान आउनका साथै अभिभावकको घरसम्म पुग्नका लागि सहयोग पुग्ने बताइन्। 'तल्लो कक्षाका हामीलाई अहिलेसम्म कसैले सम्झिएको थिएन', उनले भनिन्, 'अहिले नगरपालिकाले साइकल दिएर सम्झियो।'
रुपन्देहीकै देवदह नगरपालिकाले सबै बालविकास केन्द्रलाई नमूनाको रुपमा विकास गर्ने योजना सहित काम अगाडी बढाएको बताएको छ। शिक्षा शाखा प्रमुख टिकाराम शर्माले बालविकास केन्द्रमा रहेका बालबालिकाको संख्या अनुसार कक्षा व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताए।
उनका अनुसार २० जनासम्म बालवालिका हुनेलाई १ लाख, ३० देखि ४० जना हुनेलाई २ लाख, ४० देखि ५० जना हुनेलाई ३ लाखका दरले कक्षा व्यवस्थापन रकम दिइनेछ। शिक्षा प्रमुख शर्माका अनुसार नगरपालिकाले गत आर्थिक बर्षदेखि सहयोगी कार्यकर्ताको पारिश्रमिकमा नगरपालिकाले मासिक रुपमा थप २ हजार प्रोत्साहन रकम दिनेको गरेको छ।
कञ्चन गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सहयोगी कार्यकर्तादेखि विद्यालयका सहयोगी कर्मचारी र लेखापालका लागि थप रकमको व्यवस्था गरेको छ। गाउँपालिकाका शिक्षा प्रमुख रमेश भुसालले बालविकास केन्द्रको सहयोगी कार्यकर्ताको पारिश्रमिकमा ४० प्रतिशत थप बृद्धि गरेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार खाइपाइ आएको पारिश्रमिको त्यो दरले हिसाब गर्दा बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ताले मासिक २४ सयका दरले थप पारिश्रमिक पाउनेछन्। त्यसैगरी विद्यालयका सहयोगीको ३० प्रतिशत र लेखापालको २० प्रतिशतले पारिश्रमिक बृद्धि भएको छ। बालविकास केन्द्र, विद्यालय सहयोगी र लेखापालका लागि पालिकाले १६ लाख रकम बिनियोजन गरेको छ।
त्यसैगरी तिलोत्तमा नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७४/७५ देखि नै बालविकास केन्द्रमा लगानी गरिरहेको छ। नगरपालिकाले उक्त आर्थिक बर्षमा मासिक ३ हजारका दरले पारिश्रमिक बढाएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बालविकास केन्द्र व्यवस्थापनका लागि प्रति बालविकास केन्द्र २ लाखका दरले बजेट प्रदान गरेको छ। नयाँ आर्थिक वर्षका लागि नगरपालिकाले बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ताको पारिश्रमिकमा थप २ हजार बृद्धि गरिदिएको नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख गंगाराम आचार्यले जानकार दिए।
अब तिलोत्तमा नगरपालिका सहयोगी कार्यकर्ताले मासिक ११ हजार पारिश्रमिक पाउनेछन्। त्यसैगरी विद्यालय सययोगीलाई मासिक ४ हजार ५ सय, निमावि र माविका लागि मासिक १ हजार ५ सय र लेखापालका लागि पनि १ हजार ५ सय थप पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेको छ। नगरपालिको बालविकास केन्द्रमा सामग्री व्यवस्थापन र तालिमका लागि समेत बजेट बिनियोजन गरेको आचार्यको भनाइ छ।
रुपन्देहीकै मायादेवी गाउँपालिकाले बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ताका लागि हाते पुस्तिका तयार गरेको जनाएको छ। बालविकास केन्द्रबारे सहयोगी कार्यकर्ता, विद्यालय, जनप्रतिनिधी र अभिभावकलाई बालविकास केन्द्रको जानकारी गराउँदै सहभागीता जुटाउनका लागि हाते पुस्तिका तयार गरिएको शिक्षा शाखा प्रमुख नारायण लामिछानेले बताए।
हाते पुस्तिका तयार गर्नका लागि प्रदेश ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु, सेतो गुरास बालविकास सेवा, रुपन्देही र शिक्षाका लागि राष्ट्यि अभियानका प्रतिनिधीहरुको विज्ञतालाई समेत लिइएको उनले बताए। उनका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा पालिकाले बालविकास केन्द्रको बसाई व्यवस्थापन, सामग्री व्यवस्थापन र टेलिभिजन सेट जडानको काम गरेको थियो।